Oraahda carpe diem, nolosha ku noolow luqad kasta | Tattoo
Oraahda carpe diem, nolosha ku noolow luqad kasta ha noqotee
Tattoo-yada ayaa dhiirrigeliyay weedho saxda ah waxay halkan u joogaan inay na xusuusiyaan in noloshu tahay laba maalmood iyo inaynu ugu noolaano si buuxda.
In kasta oo ay u egtahay waxoogaa hadal ah (maahan wax la yiri tan iyo wakhtigii Horace, mana ka badna kana yaraana qarnigii XNUMXaad ee Ciise), runtu waxay tahay waa maxim mudan in si joogto ah loo xasuusto.
1 Carpe diem, ku noolow xilligan
2 Weedho isku mid ah oo ku jira tattoos
Carpe diem, ku noolow xilligan
Horacio ayaa yiri Carpe diem quam ugu yar ee loo yaqaan 'post post', taasi waa, 'qabsashada maalinta, ha aaminin berri'. Mawduucani wuxuu soo socday qarniyo laakiin had iyo jeer wuxuu leeyahay mowduuc gaar ah, tan iyo waxay u taagan tahay mid ka mid ah cabsida ugu weyn ee aadanaha: geeridu hal dhibic ayey iman doontaa oo way na kaxayn doontaa, mana awoodi doonno inaan ku raaxeysanno nolosha.
Fikradda waxaa lagu soo celiyaa ma aha oo keliya gabayadii hore, laakiin waxay ku jirtaa xaalado badan, oo badan. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah kuwa ugu casrisan uguna caansan uu yahay muujinta YOLO (oo ka timid Ingiriiska Mar Kaliya Ayaad Noolaanaysaa) taasi waxay ujeedkeedu yahay inay na xasuusiso isla casharkii: nolosha noloshu wax la hubo ma jiraan, ee xaji oo ku raaxayso waqtiga xaadirka ah.
Weedho isku mid ah oo ku jira tattoos
In lagugu dhiirrigeliyo tattoo jimicsigaaga xiga kilkisha tattoo kaliya laguma dhiirrigelin karo weedhan, laakiin, sidaad u aragto, waxaa jira kuwa kale oo badan oo isku macno ah. Laga soo bilaabo YOLO horey loo soo sheegay ilaa weedho kale oo Latin qurux badan sida Collige, virgo, ubax ('Qaado, gabar, ubax') taas waxay soo gudbinayaan nolosha oo aad u yar iyo baahida qof kasta oo aadam ah inuu ka faa’iideysto inta dhimashadu ay ina soo gaareyso.
Farriin shaki la’aan mararka qaarkood aan u baahanahay in naloo xusuusto, si kasta oo ay u muuqato iyo mowduuc u noqon karto., taasna waa lala yaabi karaa labadaba qaab fudud iyo wax baroque ka badan.
Miyaad sidoo kale aaminsan tahay muhiimadda weedho carpe diem si aan loo iloobin macnaha nolosha? Noo soo sheeg faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Oraahda carpe diem, nolosha ku noolow luqad kasta ha noqotee
Astaamaha Masaarida, waa isha lagu dhiiri geliyo astaamahaaga
Astaamaha Harry Potter, kaliya taageerayaasha ugu badan